UKUPHINDA UJONGE U-JUSTIN LIN NGETHAMSANQA ELINGCONO KUSASA - I-ASIAN YASEMELIKA
Kutheni le nto u-Justin Lin weTyala loLutsha loLwaphulo-mthetho olungcono ngethamsanqa ngomso nangoku abahlali baseMelika baseMelika
For- Isantya ngomsindo , UJustin Lin uyalele Ngethamsanqa Ngomso , Ifilimu yolwaphulo-mthetho. Iinkwenkwezi zefilimu zika-2002 uParry Shen, uJason Tobin, uSung Kang, uRoger Fan, noJohn Cho. Iziko elijikeleze iqela labafundi abakumabanga aphezulu baseAsia-Amerika abagqwesileyo kwizifundo nakwizifundo zasemva kwexesha, Ngethamsanqa Ngomso wanyamezelana kudala ukuba akhululwe okokuqala njengoko yayiyenye yeefilimu ezimbalwa ezazibalasele kubo bonke abantu baseAsia-baseMelika ngaphandle kobugcisa bemfazwe, ukufakwa okumhlophe okunokuphindaphindeka, okanye naluphi na uhlobo lobuntshatsheli. Yayiyifilimu malunga nenkcubeko yolutsha lwedolophu (ifoto yokuqala yeyoluntu lwesango oluvula iingcango zalo), njengoko abafundi abaphumeleleyo bekruquka ziindlela zabo eziqhelekileyo kwaye baqala ukuvukela ngezikim, ulwaphulo-mthetho, kwaye ekugqibeleni, nokubulala.
Umlingiswa wethu ophambili nguBenjamin Manibag, iqela labahlobo bakhe, uVirgil Hu, uDaric Loo, noHan Hu, baqala ukwenza ulwaphulo-mthetho oluncinci: ukuba izixhobo zekhompyuter, ukwenza amaqhekeza wokukopela kunye nokuzithengisa, kwaye ngequbuliso, isicelo esivela ku-Ben's nemesis (wakhe otyumkileyo uStephanie isoka), uSteve Choe, ukuphanga indlu yakhe yobukhazikhazi-into uChoe ayibiza ngokuba ngumnxeba wokuvusa abazali bakhe. Kwimizamo yokohlwaya uSteve, okanye mhlawumbi ukubuyela kuye, baceba ukumhlasela endaweni yoko, kodwa baphele bambulale-oko akuthethi kuthi ekuqaleni, kodwa phakathi koyika kakhulu iba sisenzo senjongo.
Njengoko Ama-Asiya aTyebileyo ilungile ngekona, ithi ngandlela ithile izive kufanelekile ukuba iphinde iphinde iphindwe Ngethamsanqa Ngomso , umboniso bhanya-bhanya ongenakuhluka ngakumbi kwisikali okanye kwisiseko, ukanti uhlala kuhlobo olufanayo lwencoko malunga nokumelwa kwe-Asiya, iklasi kunye nemvukelo. Zombini ezi bhanyabhanya nazo zijamelene nesiphumo esifanayo sokumelwa, oko kukuthi xa zimbalwa iifilimu ezinabalingisi baseAsia naseMelika, bajongana noqwalaselo ngakumbi noxinzelelo lokuba yiyo yonke into kuye wonke umntu.
Kunyaka ophelileyo, uMnyhadala weFilimu waseLos Angeles Pacific uvulwe ngokuboniswa kwefilimu kaLin ukuphendula uScarlet Johansson ethatha indima ephambili Ghost kwiShell kwaye Intatheli yaseHollywood ubhale ukuba ifilimu iyaqhubeka nokubonana neAsia American Hollywood emva kweminyaka eli-15.
Ngethamsanqa Ngomso iphefumlelwe libali le UStuart Tay , Umfundi wesikolo esiphakamileyo e-Orange County owabulawa kabuhlungu ngabanye abafundi abahlanu abaphethe i-baseball bats kunye ne-sledgehammer. Ityala lafumana ingqalelo kuba onke amakhwenkwe abandakanyekayo, gcina enye, babezizityebi, bakrelekrele, kwaye base-Asia naseMelika. Omnye wabo wayebotshelelwe kwi-Ivy League kwaye ebotshelelwe kwi-valedictorian. Babenamanqaku amakhulu eSAT. Bavolontiya. Umbuzo wavela ngokuphindaphindiweyo: Kutheni befuna ukubulala umntu?
IRejista yeNqila yeOrange Yayibiza ngokuba yi-Honor Roll Murder. Igama ibambekile . Umgca omnye usuka kwi IChicago Tribune Yibhale phezulu ngo-1993 ndisahleli engqondweni yam: njengokuba la makhwenkwe ayehleli kwisikhululo samapolisa, ipolisa elalibajongile laxela ukuba ubuso babo babungenanto kwaphela omnye ebotshiwe esihlalweni sakhe, esenza umsebenzi wakhe wesikolo owenzelwa ekhaya.
Kukho izinto ezimbalwa kuloo mfanekiso endibethayo: Iyandikhumbuza indlela umsebenzi wasekhaya, iiklabhu kunye nokufunda kuyo Ngethamsanqa Ngomso Ndiziva ngathi kukho into eyenziweyo kwi-autopilot, impumelelo elindelwe ngokwendalo kwaye ithathwa ngokungakhathali kangangokuba baziva kwangaxeshanye njengenxalenye engenakuchazeka yesazisi sakho kwaye ingeyonxalenye yokuba ungubani na kwaphela.
U tracee ellis ross utshatile
Ukukhankanywa kwe-Mafia yamaTshayina, umona wentombazana eyayiyintombi yakhe, okanye iimilo zemigulukudu yasedolophini zadudulwa njengeenjongo. UAndrew Ahn we Amaxesha eKorea batyhola ukungabikho kwemfundo yokuziphatha ezikolweni kwaye bathi amakhwenkwe ayengamaMelika. (URobert Chien-Nan Chan, ochongwe ngamabali eendaba njengeyona nkokeli, kamva wafunyaniswa ukuba une-paranoid schizophrenia, kodwa ukuxilongwa ngelishwa akuzange kulincede ityala lakhe.)
Impendulo kwi Ngethamsanqa Ngomso icacile, nangona: Babephezu kweentloko zabo. Ngokungafaniyo nemeko kaStuart Tay, kubonakala ngathi uBen nabahlobo bakhe baye babaleka nolwaphulo-mthetho, ukuba kuphela ngokwasemthethweni-kuyacaca ukuba umonakalo wengqondo kumakhwenkwe ngamnye unzulu, kwaye uVirgil uzama ukuzibulala.
Ubungqongqo, ubundlobongela kunye nokuziphatha gwenxa kwefilimu kwakuyinxalenye yento eyenze ukuba ibe yinto enkulu kangako. Ngokwam, iqela labahlobo bam kwaye ndacinga ukuba kuyonwabisa ukubona uBen kunye neqela lakhe beba bexoka kwaye beyila iskimu kwaye betyeshela oko kulindelwe luluntu kubo, ngokuthe tye Njengokusebenza njengee-alibis, kunye neeklabhu zabo zesikolo ezibagubungelayo. Kwakunomdla ukubabukela bengathobeli uhlobo oluthile lokuthobeka. Ewe, yayingengombono ofanayo: Ilungu labaphulaphuli eSundance lagxeka uLin ngokubonisa ama-Asiya-Amerika kakubi, ekhokelela uRoger Ebert ukukhusela ifilimu ngokuphendula,
Kwaye into endiyifumanisa ikhubekisa kwaye indithobile malunga nengxelo yakho akukho mntu unokuthetha kwiqela labenzi bamabhayisikobho abamhlophe, 'Ungayenza njani le nto kubantu bakho?'… Abalinganiswa baseAsia nabaseMelika banelungelo lokuba ngabaphi na esihogweni bafuna ukuba . Akunyanzelekanga ukuba ‘bamele’ abantu babo.
Umzala wam, owayefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo ukubulawa kukaTay, wandixelela ukuba, xa esiya ekholejini, abantu bazosazi eso sikolo njengabantu baseAsia kunye nokubulala. Ngaphezulu nje kweminyaka elishumi kamva, nam ndiza kuya phaya, kwaye ibali likaTay laliza kuphindwa liphantse lifane nenyani emnandi, imbali evuselelayo, kwinto evakalelwa njengesikolo esiqhelekileyo nesisesidolophini, apho abantu banokuthi bachulumanco ngokusondela .
Ngaba umthetho wamajude ukapteni uyamangaliswa
Oku kuthetha ukuba, kukho ubumnandi bokuchasa imodeli yentsomi encinci eyapeyinta amaAsia-Amerika njengezinto ezothusayo-ezivumela iifilimu ezinje Ngethamsanqa Ngomso ukuphumelela, kodwa ikwakhona enokusishiya sothukile kunokuba besifanele ukuba njalo. Ifilimu yeLin, nangona kunjalo, ibonakala ngathi izama ukuthintela ubungozi bokuzukiswa okanye ukubonwa okumangalisayo kulo lonke.
Sibona oku ekusebenziseni kwayo imipu: UDerek utsala umpu kulowo afunda naye okhetha ukulwa nabahlobo bakhe, ephosa amazwi obuhlanga kwaye ewagxotha. Ngokukhawuleza, abafundi abamhlophe boyika kwaye boyika — uVirgil usuka kwimincili aye koyika kwi-monologue emangazayo emva koko, kodwa umpu uyaqhubeka ubuya njengophawu lwamandla. UVirgil utsala umpu wakhe kuDerek kwesinye isiqendu, kwaye kuyacaca ukuba uyayibona njengendlela yokusebenzisa amandla, kunye nombono othile ojijekileyo wentlonipho, ngewayengenakuba nayo.
Yiyo kanye le mpu ethi ihambe ngengozi kamva, kumzabalazo ophela ngamakhwenkwe abulala kwaye angcwaba uSteve. Ngumpu ofanayo uVirgil kamva awonzakalisa ngawo. Endleleni, amakhwenkwe ahlala egxeka omnye ngezithuko ezinje ngokungakhathali, ukuthetha ngokungakhathali malunga nokubekwa, kunye nezinye iintlobo zokuthukwa ngokwesini. Ngethamsanqa Ngomso ingaphezulu kwentsomi engobomi obumnandi obuphindiweyo bamadoda aseAsia-Amerika.
Ubukhazikhazi bokuchasana noloyiko kusenokwenzeka ukuba ngokulula nje buguqulwe buba yimbono yobudoda bobungqingili-ukuxhotyiswa kwamadoda njengokuphindaphindwa kwamandla amhlophe kunokuwachitha. Nangona kunjalo, akukaze kubonakale ngathi aba bafana kufuneka banamathele kufundo lwabo nakwiikholeji zokusebenza. Endaweni yoko inika umbuzo onzima malunga nokufikisa okungafumanekiyo, kwaye apho la makhwenkwe kufuneka adlulise ukungoneliseki kwabo kunye nemvukelo.
KwiNary Kim's inqaku ukwenzela i Ijenali yaseMelika yaseMelika , Ngaba ulunge kakhulu ukulungelwa kwakhe? Ukuzimiselwa koMfundi 'waseModeli' waseAsia waseMelika, uKim ujonge ngqo kwifilimu yeLin kunye nokulungiswa kwetyala lokubulala lokwenyani ngokusebenzisa iitrope ezimbini, zombini eziqulethwe zaza zaphazanyiswa ngabalinganiswa abaqaqambileyo, abafundayo nababulala: imodeli encinci Ingozi etyheli.
Kutheni uzulazule ngaphaya urhoxisiwe
UKim ubhala ukuba ukubulala kwaxelwa njengobuchule obucwangcisiweyo, obunobuchule obunobuchule obubonisa indlela oothixo abanokuthi balikhulise ngayo ityala (thelekisa oku, yithi, indlela amadoda amhlophe athethwa ngayo njengabanobomi babo phambi kwabo, okanye egcwele amandla ). Kumzabalazo woluntu lwaseAsia-Amerika lokuqonda ukwanda kobuqhetseba kulutsha, uKim ubeka ukuba olu hlobo lokungazi ngabom lunokubonwa njengokuchasana nomngcipheko otyheli othintela naluphi na uhlobo longenelelo olunentsingiselo.
Ngaphandle kwenyaniso kwindalo iphela yokuba bonke abantwana abafikisayo baya kuva uhlobo oluthile lwe-angst, uKim ubhala, kubonakala ngathi abafundi base-Asiya baseMelika bakhetheke bodwa ukuba bafumane ubunzima besazisi-umnqweno otyhafisayo wokwala ukwahlulwahlulwa kokufunda kunye nobundlobongela obubafikela ngokwemvelo ngokobuhlanga babo kwaye bamkela uguquko olutshintshileyo lwe-ego ephefumlelweyo yimbonakalo yengozi etyheli.
Impumelelo Ngethamsanqa Ngomso kwaye ilifa laso elihlala lihleli alikho nje ngenxa yokuphoswa kwalo, kodwa ngenxa yokuqonda ngokungxamisekileyo kule ngxaki yesazisi, umzabalazo onzulu wobuntu kunye nezopolitiko othi-iqela lomculo libonise-wonke umntu ulawula ngokwahlukileyo, kwaye ayinguye wonke umntu osindayo.
Yonke Into Iyanya
Usapho Lwasebukhosini Lwasebrithani
I-dc yamaqhawe amantombazana exesha lesi-2
"betha igama lokugqibela"
Iimfazwe zenkwenkwezi isiqendu 9 ipowusta evuzayo
UGeorge lucas wadlwengula ubuntwana bethu